चितवनका कांग्रेस साथीहरुलाई खुल्ला–पत्र – Everest Dainik – News from Nepal
हलोमा भोट हाल्दा तपाईलाई बिपी, गणेशमान र गीरिजाबाबूको आत्माले धिक्कार्दैन ?
यस्तो परिस्थितिमा बाम एकतालाई अधिनायकवाद वा निरंकुशतातिरको यात्रा ठान्नु वा प्रचार गर्नुमा कुनै तुक देखिँदैन ।
के नेपाली कांग्रेसले जित्नु मात्र लोकतन्त्र हो ? प्रतिस्पर्धामा कुनै शक्तिले विजय हासिल गर्दा लोकतन्त्र धरापमा पर्छ भन्नु लोकतन्त्रप्रतिको आफ्नै प्रतिवद्धताबाट बिचलित हुनु हो । २०१५ सालमा कांग्रेसले बहुमत ल्याउँदा लोकतन्त्र धरापमा नपर्ने तर अहिले बामपन्थीले ल्याए धरापमा पर्ने कसरी हुन सक्छ ? कांग्रेस, एमाले र माओवादीमध्ये अहिले कांग्रेस नै सबैभन्दा बढी अलोकतान्त्रिक देखिएको छ । कांग्रेसको आन्तरिक जीवनलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ निरंकुशता, परिवारवाद र एकमना निर्णय नै मूख्य छ । आफैलाई रुपान्तरण गर्न नसक्ने कांग्रेसले अरुलाई लोकतन्त्रको उपदेश दिने हैसियत राख्न सक्छ ? कांग्रेसका साथीहरु कतिञ्जेल यो भ्रम पालेर बस्नुहुन्छ ?
चितवनको क्षेत्र नं. ३ मा प्रचण्ड र बिक्रम पाण्डे प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ । प्रचण्ड यो देशको नेता हो, शान्ति प्रक्रियाको एक हस्ताक्षरकर्ता पनि । प्रचण्ड नभएको भए नेपालमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको स्थापना सम्भव थिएन । शान्ति प्रक्रिया सम्भव थिएन । जतिबेला प्रचण्ड दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँले क्रान्ति र शान्तिमा मात्र नभएर समृद्धिमा पनि चमत्कार गरेर देखाउनु भयो । देशमा लोडसेडिङ यति छिटै हट्ला भन्ने हाम्रो कल्पनामा थिएन । तर, लोडसेडिङ हट्यो । विकासका कामले गति लिए, आर्थिक वृद्धिदर बढ्यो, मूल्यबृद्धि रोकियो । प्रचण्ड पाँच वर्ष लगातार प्रधानमन्त्री भएको भए यो दर कति माथि पुग्थ्यो होला ? हामीले सजिलै अनुमान गर्न सक्छौं । स्थीर सरकारको पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री हुन पाउने भने प्रचण्डले विकास र समृद्धिमा चमत्कार गर्न सक्छन् भन्ने यो एउटा प्रमाण हो ।
हामी चितवनको विकास चाहन्छौं । त्यसका लागि प्रचण्ड चितवनका लागि आवश्यक छ । हामीले दलको घेरा र पूर्वाग्रहबाट सोच्यौं र प्रचण्डका विरुद्ध लाग्यौं भने प्रचण्ड मात्रै हार्ने छैनन्, चितवनले हार्नेछ, यहाँको विकासले हार्नेछ । जनताको आशा र विश्वासले हार्नेछ । अथाह सम्भावना बोकेको हाम्रो जिल्लालाई हामी दलको मतियार मात्र बनेर हराउन सक्दैनौं । दलका नाममा हामी दशैंका खसी बोका बन्न सक्दैनौं । हामीसँग चेतना छ, सकारात्मक सोंच छ, चितवनको ढुकढुकी छ, नेपालीपन छ, त्यसका लागि प्रचण्डले चितवनबाट जित्नुपर्छ ।
२ मंसीर, २०७४, शिवनगर चितवन
ट्याग्स: cmprachanda, congresh